BlackBerry dia ho eo amin'ny MWC ary hanambara ny smartphone «Mercury» vaovao | Vaovao momba ny gadget
BlackBerry dia ho eo amin'ny MWC ary hanambara ny finday finday «Mercury» vaovao
BlackBerry dia hanatrika ny Mobile World Congress izany dia hatao herintaona indray ao Barcelona, ​​ary tsy amin'ny fomba fijoroana vavolombelona izay noheverin'ny maro amintsika, fa ny hanolotra fitaovana vaovao amin'ny fomba ofisialy "Merkiora". Ny fotoana voatondro dia amin'ny 25 Febroary ary hahita indray fitaovana iray misy kitendry ara-batana isika ary hametrahana Android Nougat 7.0 ao anatiny.
Ny efijery an'ity fitaovana vaovao ity avy amin'ny orinasa kanadianina dia ho 4.5 santimetatra miaraka amin'ny tahan'ny 4: 3, kitendry QWERTY ara-batana ary sensor am-po izay hampidirina ao anaty bara habakabaka, amin'ny zavatra iray izay toa nahagaga farafaharatsiny.
Ao anatiny no hametahana mpanera Qualcomm Snapdragon 625 tohanan'ny RAM 3GB. Raha ny fakantsary lehibe dia hanana sensor 18 megapixel izy ary 3.400 mAh ny batteriny, izay mihoatra ny ampy hanana fizakan-tena lehibe raha oharina amin'ny haben'ny efijery.
Ny iray amin'ireo zavatra mahagaga indrindra amin'ity smartphone vaovao ity dia ny fananany Android 7.0 Nougat hametraka ao anatiny ho azy, ary mahatonga azy io ho iray amin'ireo fitaovana finday voalohany nahatratra ny tsena tamin'ity kinalan'ny rafitra fiasa Google ity.
25.02.17 # MWC2017 #BlackBerryMobile pic.twitter.com/uChVjp62TJ
- BlackBerry Mobile (@BBMobile) Janoary 24, 2017
Amin'izao fotoana izao dia tsy fantatsika ny vidin'izany BlackBerry DTEK70 Mercury, izay nifantoka tamin'ny tontolon'ny asa tamin'ny voalohany, na dia azo antoka aza fa nisarika ny sain'ny mpampiasa maro hafa amin'ny karazany rehetra izy.
Mihevitra ve ianao fa hisy fiantraikany amin'ny BlackBerry ny Mercury vaovao?. Lazao aminay ao amin'ny habakabaka voatokana ho an'ny fanehoan-kevitra amin'ity lahatsoratra ity na amin'ny alàlan'ny tambajotra sosialy misy anay.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny gadget » General » About us » BlackBerry dia ho eo amin'ny MWC ary hanambara ny finday finday «Mercury» vaovao
Netflix dia manavao ny fampiharana Android azy ary mamela ny atiny halefa ao amin'ny microSD
Resident Evil 7 mahazo tehaka amin'ny mpampiasa na eo aza ny faharetany "fohy"